Anyịnya Anọ nke mmalite | Martech Zone
Wednesday, February 18, 2009 Tuesday, October 7, 2014 Douglas Karr
Anọ m na-arụ ọrụ na mmalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ugbu a. Inyocha ihe ịga nke ọma na ihe ịma aka nke mmalite m na-arụ ọrụ maka, ya mgbe oru buu igba n'ulo na ndị mbụ na-aga nke ọma na-aga na-esote ha mmalite. Ekwenyere m na enwere nsogbu anọ nke mmalite (na ndị ọchụnta ego) ga-ezere ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịlanarị.
Anyịnya Anọ nke mmalite:
anyaukwu - M nwere ike afanyekwa ọzọ ego, mee elu mee.
Hubris - Agam abu ihe kpatara anyi ga n’ihu n’ihu n’ihu.
Amaghi - Achọghị m ige ntị, ama m nke ọma.
Na-achịkwa - Amaara m nke ọma, Aga m agwa gị otu esi eme ya.
Ihe mmalite enweghị ihe ịga nke ọma na “M”, ọ bụghị na echiche na ego na-ewukwasị ya. A mmalite ihe ịga nke ọma na-wuru site ịrịba talent nke ndị kasị nso ahịa, na atụmanya, Ma ọ bụ ndị nsogbu.
Ọ na-ewe ndị ọrụ pụrụ iche ka ha kwaga ijeụkwụ nke mmalite chọrọ. Ikwesiri nchikota ndị na-ebuli ihe na ndị na-ebugharị… ndị ọrụ na-ejide ihe niile na ndị ọrụ na-eme ka ndị mmadụ gaa n'ihu.
Enwere m ngọzi ka mụ na ụfọdụ ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi mara mma gbara gburugburu ugbu a na-arụ ọrụ. Hụ ọganiihu na awa na ụbọchị karịa ọnwa na afọ ga-akpali nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla ume.
Feb 19, 2009 n’elekere 9:23 nke abali
Ahụla m ya aka mbụ - njirimara niile ị kọwara - nhọrọ dị n'aka mmadụ ole na ole ma jiri nwayọ belata ma ndị otu ahụ emeso ha ka enyere ndị ọrụ aka… onye ndu na-eto eto nke na - enweghị ike ịkwụsị njikwa nkwenye nke onwe ha. , ịghara ị peoplea ntị na ndị nwere ọtụtụ afọ na ahụmịhe dịgasị iche iche, na iwu iwu, na -emepụta ọnọdụ nke ịza ajụjụ, mana enweghị nzaghachi mgbe ọ na-egbochi obi ike ma na-etinye ihe dị nso na ọrịa "nwunye a na-eti ihe".
Yup, Ahụla m ihe ndị ahụ niile. Thoselọ ọrụ ndị ahụ mechara daa. Jisie na mmalite gị, enwere m olile anya na ọ nwere akara aka ka mma.
Feb 24, 2009 n’elekere 12:13 nke abali
Ọ bụ eziokwu. Ndị a “ndị na-agba ịnyịnya” 4 dị ka i kwuru nwere ike igbu mmadụ. N'ịnọ na ụlọ ọrụ ahụ, enwetaghị m ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji eche na ọ dị mfe.
Gaa m na peeji mbụ nke Google. Amaara m na ụlọ ọrụ na-enweta ego n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, olee otu m ga-esi ree ọzọ ugbu a? M ka malitere webusaiti m ụbọchị abụọ gara aga, gịnị kpatara na anaghị enweta ọtụtụ okporo ụzọ?
Maka ihe kpatara ya, onye ọ bụla na-eche na ihe ndị a na-eme na-enweghị mbọ ọ bụla. Kpọtụrụ ha banyere imelite ebe nrụọrụ weebụ ha ma ha "enweghị oge" mana ihe ndị a niile ga-eme na mberede.
Ha choro isi na A ruo ebe Z na-emeghi ihe obula. Ọ bụ ọrụ siri ike. I nweghi azịza niile. Nke ahụ bụ eziokwu nke ya. Ugbu a tinye atụmatụ iji mee ka ihe mee. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịba ọgaranya ngwa ngwa, gaa nwalee otu n’ime ndị ahụ na-akpata esemokwu n'abalị telivishọn. Jisie na nke ahụ. Anyị ka ga-anọ ebe a na-arụ ọrụ mgbe nke ahụ dara.